HUBAAL: Madax Waynaha Xidhiidhka Kubbada Cagta France Ee Noël Le Graet Oo Cadeeyay In Nabil Fekir Uu Ka Gudbay Tijaabada Caafimaadka U Maray Liverpool. – GOOL24.NET
HUBAAL: Madax Waynaha Xidhiidhka Kubbada Cagta France Ee Noël Le Graet Oo Cadeeyay In Nabil Fekir Uu Ka Gudbay Tijaabada Caafimaadka U Maray Liverpool.
Kadib saacado badan oo ay jaho wareer ku soo jireen jamaahiirta kooxaha Lyon, Liverpool iyo xulka qaranka France oo ay saxaafadu haddaba war ka qoraysay heshiiska ay Liverpool kula soo wareegayso Nabil Fekir, waxaa ugu danbayn warka ugu xaqiiqsan ee laysku halayn karo sheegay madax waynaha xidhiidhka kubbada cagta France ee Noël Le Graet.
Madax waynaha xidhiidhka kubbada cagta France ee Noël Le Graet ayaa shaaca ka qaaday in uu muddo 15 daqiiqo ah la kulmay Nabil Fekir saaka isla markaana uu aad ugu kalsoon yahay natiijada tijaabada caafimaadka ee uu Liverpool u maray.
Hadalka Noël Le Graet ayaa imanaya muddo 24 saacadood ah markii ay kooxda Lyon si adag u beenisay in ay heshiis la gaadhay Liverpool, balse hadda waxaa xaqiiq iyo war aan soo noqon doonin uu Noël Le Graet ku sheegay in Fekir uu maray tijaabada caafimaadka Liverpool oo uu waliba aad ugu kalsoon yahay.
Dhinaca kale madax waynaha xidhiidhka kubbada cagta France ee Noël Le Graet oo si wayn uga farxinaya jamaahiirta Liverpool ayaa sheegay in uu rajaynayo in heshiiska Fekir ee Liverpool la dhamaystiri doono ka hor inta aanu koobka aduunku bilaamin.
Waxaa soo baxayay warar sheegayay in Liverpool ay ka walwalsan tahay xaalada baadhitaankii Nabil Fekir oo dhibaato jilibka ka dareemaya laakiin Noël Le Graet ayaa sheegay in baadhitaanku uu noqon doono mid fiican oo lagu kalsoon yahay.
Madax waynaha xidhiidhka kubbada cagta France ee Noël Le Graet oo ka hadlaya kulankii uu la yeeshay xidiga qarankiisa ee Nabil Fekir ayaa yidhi: ” Saaka ayaan Nabil 15 daqiiqo arkay, isagu waa wiil cagaha dhulka ku haya, waxa uu dhexda ugu jiraa wada xaajood waxaanan filaya in la dhamaystiri doono”.
Noël Le Graet oo hadalkiisa sii wata ayaa yidhi: ” Tasi isaga kama horjoogsanayso in uu aad diirada u saaro kooxda qaranka France, ruux aad u fiican ayuu leeyahay, waxaa ka fiicnaan karta in la wareegistiisa la dhamaystiro ka hor inta ayna Russia u duulin”.
Noël Le Graet oo ka farxinaya jamaahiirta Liverpool ayaa yidhi: “Isagu waxa uu u muuqday in uu arintan ku niyadsan yahay sababtoo ah baadhitaankii caafimaad ee uu maray waa mid fiican. La wareegistu markasta waa sidaas , dhinac kastaaba waxa uu isku dayaa in uu qiimaha ku qasbo, sare loo qaado ama hoos loo dhigo”.
Hadalka madax waynaha xidhiidhka kubbada cagta France ee Noël Le Graet waxa uu daaha si buuxda uga qaaday in Nabil Fekir uu maray tijaabada caafimaadka Liverpool isla markaana ay waliba natiijo fiicani ka soo baxday wuxuuna rajaynayaa in heshiiskan la dhamaystiro inta aanu xulka qaranka France u duulin Russia.
Jamaahiirta Liverpool ha ka fogaanina Gool24.net, kana filo warka ku dhawaaqista!, haddii heshiiskii Fabinho uu ahaa mid saacado ku dhacay waxa uu Nabil Fekir noqday heshiis ay waqti dheer u dheg taagayaan jamaahiirta Reds iyo waliba kuwa kubbada cagta aduunku.